Nhau - Zvimiro zvesimbi isina kuchena firita chinhu
Stainless simbi firita zvinhu zvakapatsanurwa kuita pleated firita zvinhu, uye sintered pajira riya firita element.We tinosuma hunhu hwesimbi simbi firita zvinhu.
Hunhu hwesimbi firita chinhu ndeichi: inogona kushandiswa pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya; inokodzera pamhepo yakaderera kumanikidza yekuwachisa uye kumutsidzira.
Zvinoenderana nenzira dzakasiyana dzekuumbika, rakakamurwa kuita simbi mesh ronda firita chinhu, simbi mesh (yakanzwa) yakapetwa firita chinhu, simbi ndiro mesh sintered firita chinhu, simbi hupfu sintered Sefa chinhu, simbi wedge waya ronda firita chinhu. Izvo zvakasiyana maficha anoziviswa sezasi.
(1) Simbi mesh ronda firita chinhu: ine 10 ~ 000pum filtration chiyero; zvinoenderana nezvinodiwa chaicho zvekushandisa, dzakasiyana rutsigiro mesh dhaidhi zvivakwa zvinogona kusarudzwa mukati nekunze firita. Inowanzo shandiswa pane iyo firita yekumanikidza yakaderera uye kazhinji kudzosera kumashure kunodiwa.
(2) Simbi mesh (yakanzwa) yakakwenenzverwa firita chinhu: ine 5 ~ 300um firita chiyero; iyo firita nzvimbo mushure mekupeta yakawedzera zvakanyanya, uye simba rechinhu chesefa rakagadziriswazve zvakanyanya. , Inowanzo shandiswa mumamiriro ezvinhu apo kumanikidza kwekutsvina kwakakwirira uye hombe yekubata tsvina inokwana inodiwa; kunyanya iko kushanda kunotendera iyo firita chinhu kubviswa uye kucheneswa; mune chemakemikari fiber, inopawo iyo yakanyunguduka firita chinhu iyo inogona kushanda pakumanikidza kweanopfuura 10MPa.
(3) Metal ndiro pajira riya sintered Sefa chinhu: filtration kururama 5 ~ 200pum; iyo firita ndiro yakaumbwa nekukorobha iyo yakawanda-yakasara firita skrini (inosanganisira yemukati neyekunze girazi screen) pasi pemamiriro ekushisa kwakanyanya uye yakanyanya kumanikidza inogona kumira yakakwira yekumanikidza mutsauko uye chengetedza pevhu kusefa Unhu, saka zviri nyore kuchenesa. Inowanzo shandiswa pane iyo firita yekumanikidza mutsauko wakakwira uye kazhinji online kudzoreredza kunodiwa.
(4) Simbi yeupfu sintered firita chinhu: kusefa kwekuchenesa 0.5 ~ 100pum; firita rukoko rwunoumbwa nesintering simbi yeupfu pasi pekupisa kwakanyanya uye yakakwira mamiriro inogona kumira yakasimba yekumanikidza mutsauko Nekuti iyo yakaumbwa firita rukoko ine hunhu hwekudzika kusefa mune yekukora mativi, Naizvozvo, hazvisi nyore kuchenesa, asi ine yakakwira kusefa kusefa uye hombe imwe-yenguva tsvina tsvina inobata chinzvimbo. Inowanzo shandiswa panodiwa zvakakwana filtration, uye marara ari zvinyoro nyoro kana zvinhu zvecolloidal, panzvimbo pezvinhu zvesimbi zvinofefetera izvo zvisingakwanise kushandiswa, uye panodzokerwa pamhepo 3 kusvika ku5 online.
(5) Simbi wedhi waya ronda firita chinhu: Iyo filtration chaiyo ndeye 25 ~ 5000pum, inoenderera ichikuvadzwa netambo yegeji, ine simba rakakura uye yakakura kuyerera kugona. Inogona kushandiswazve kakawanda uye inoshanda zvakanyanya. Iyo inonyanya kukodzera iyo LAC uye SAS akateedzana akazara otomatiki backwash filtration masystem akatangwa naFeichao.
Aya ari pamusoro ndiwo maficha esimbi isina tsvina firita.